Yiziphi izindlela zokwakha ithrafikhi eyenza emuva kwe-e-commerce backlink?
Lapho wonke amasu wokusebenzisa injini yokusesha asebenza ngokufanele kusayithi lakho, izosiza ibhizinisi lakho libe lizinga eliphakeme ekhasini lokuphumela wosesho futhi lunikeze ukugeleza okuqhubekayo kwethrafikhi ehlosiwe. Yenza injini yokusesha injini ebaluleke kakhulu kumawebhusayithi e-ecommerce. Uma kwenziwa enkimbinkimbi ngokumaketha kwezokuxhumana komphakathi, ukumaketha kwe-imeyili, kanye neminye imikhankaso yokuphromotha, yenza noma iyiphi ibhizinisi le-intanethi liphumelele.
I-SEO efomini layo eyisisekelo ingahlukaniswa ekuqinisekiseni ukuphumula kanye nokusekhasini. Ukuhlelwa kwekhasi eliku-ongu libhekisela kuwo wonke amasu okusayithi asebenzayo ukuze athuthukise isipiliyoni somsebenzisi ngomthombo wakho wewebhu. Ngaphezu kwalokho, kusiza ukusiza izinjini ukuqonda ukuthi isayithi lakho lizobavumela ukuthi babonise lona ngombuzo owufanele womsebenzisi. Ukukhishwa kwekhasi lokungaxhunyiwe kusebenza ukwenza izinjini zokusesha zikhethe ngqo ikhasi lakho lewebhu njengento efanele kakhulu kumbuzo womsebenzisi. Ingxenye eyinhloko yalokhu ivela e-backlinks. Udinga ukuthola ama-backlink ekhwalithi kusuka kwamanye imithombo ye-web ehlobene niche ukwenza isayithi lakho libonakale kulabo ababukeli bakho abahlosiwe.
Ama-Backlink esikhathini sabo ahlukaniswe abe yi-dofollow ne-nof follow. Ukulandela emuva kwe-backlink yilabo abafaka i-website yakho SEO. Izixhumanisi ezinjalo zikhonza njengamavoti avela eminye imithombo.
Ngaphandle kwalokho, akukho okulandelayo emuva kokuxhumanisa lapho kukhona umuntu enikela emuva ngemuva kokungahambisani nanoma yiliphi inani kwisayithi elixhunyiwe.Ukwenza isixhumanisi esingalandeli, umlobi udinga ukufaka kancane umbhalo owengeziwe ku-HTML yesixhumanisi. Ukuhlola ikhodi ye-HTML, ungabuye utshele ukuthi isixhumanisi silandela noma cha. Isibonelo, inani elikhulu lezixhumanisi ezivela ku-YouTube, Facebook, blogs, kanye namaforamu cishe azikho njalo okulandelayo. Kukhona okuhle kakhulu kumandla wakho we-brand, kepha ngeke ukwazi ukukunika amandla ekubekeni kwe-injini yokusesha.
Indlela yokunquma ukubaluleka kwezixhumanisi ezingenayo?
Kunezici eziningana ezibalulekile okufanele zicatshangelwe ekunqumeni ukubaluleka nomthelela we-backlinks.
Ake sicabangele ezinye izici ezisemqoka ezingemuva kwe-backlink:
Izixhumanisi zangaphandle ezivela kumasayithi aphezulu ziwusizo kakhulu ekusebenziseni iwebhusayithi kunabanye abavela ezingosini ezingabalulekile nezingezansi;
Izixhumanisi ezivela ezizindeni eziyingqayizivele ziletha inani elikhulu kusayithi lakho kunezixhumanisi ezisuka kumasayithi ahlanganiswe nawe ngaphambili;
Okubhekene nezixhumanisi zokuqukethwe zamukelwa ngabasebenzisi kangcono kunokuba zingabalulekile ezihlokweni;
Izixhumanisi nemibhalo ekhonjiswayo efanele futhi elungiselelwe idlulisa inani elingaphezulu legama elingukhiye, ikakhulukazi uma lizwakala njengegama lakho lomkhiqizo.
Indlela yokudala i-backlink eyenza i-traffic?
Yakha okuqukethwe okuzokwabiwa ngabasebenzisi
Indlela elula yokuthola ama-backlink eziphilayo endaweni yakho ye-e-commerce ukudala okuqukethwe okukhulu nokucindezelayo ebhaliwe, ividiyo noma ifomu elilalelwayo abasebenzisi abazolihlanganyela ngesifiso sabo.
Dala izibuyekezo zakho zomkhiqizo
Enye indlela yokwakha isixhumanisi esilula kodwa ewusizo ukufinyelela kuma-blogger ukudala ukubuyekezwa okuhle kwemikhiqizo yakho. Kuzobekwa ngokwemvelo ukuxhumanisa emuva kusayithi lakho Source .